ढाड सेक्नेगरी बढ्यो कर, हेर्नुस् के मा कति बढ्यो ? – Samaj Khabar
ढाड सेक्नेगरी बढ्यो कर, हेर्नुस् के मा कति बढ्यो ?
संबाददाता : Samaj Khabar प्रकाशित मिति: १ श्रावण २०७५, मंगलवार ०२:३४
काठमाडौं । काठमाडौं । मंगलबारदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ । सरकारले गएको जेठ १५ गते बजेट भाषणमा उल्लेख गरेका केही प्रावधान जेठ १६ गतेदेखि नै लागू भएपनि धेरैजसो प्रावधान भने मंगलबारदेखि लागू हुँदैछन् ।
तर मंगलबारदेखि भने दूरसञ्चार सेवा दस्तुर १३ प्रतिशतले बढेकाले उपभोक्ताले इन्टरनेटमा थप पैसा तिर्नुपर्ने भएको छ । नयाँ फोन जडान गर्दा पनि थप १ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । सरकारले आफूहरुलाई कर थोपरेकाले मूल्य बढाउन बाध्य भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ आइएसपीएनका पूर्वअध्यक्ष तथा भायनेटका प्रमुख विनय बोहोराले बताए ।
१ श्रावण २०७५, मंगलवार ०२:३४ मा प्रकाशित